Tsy maintsy taterina ny fiaingan'ny Tiorka sy Kaicos noho ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Tsy maintsy taterina ny fiaingan'ny Tiorka sy Kaicos noho ny COVID-19
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Madagascar Malgache Vaovao • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fiaingan'ny Tiorka sy i Caicos
The Minisiteran'ny fizahantany any Turks sy Caicos ary ny Board Tourist dia manohy miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana rehefa manalefaka izy ireo Covid-19 any amin'ireo nosy. Araka izany, ny fiaingan'ny Tiorka sy i Caicos dia tsy maintsy taterina ary hampiharina mafy.
Ny Minisiteran'ny Birao sy ny fizahantany dia nahazo alalàn'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Turks ary ny nosy Caicos dia miara-miasa akaiky amin'ny Provo Air Center sy ny Blue Heron Aviation hanamorana ny fandefasana fiaramanidina amin'ireo nosy ho an'ireo tsy mponina, tompon'ny fahazoan-dàlana hiasa ary mpitsidika vonjimaika izay any amin'ny nosy amin'izao fotoana izao ary maniry hiala.
Ireo izay hiainga dia tokony hifandray amin'ireto sampan-draharaha manaraka ireto raha mila antsipiriany momba ny sidina.
Provo Air Center: [email voaaro]
Blue Heron Aviation: [email voaaro]
Ataovy mora ampiasaina ireto fampahalalana manaraka ireto:
Isan'ny olona ao amin'ny fety fitsangatsangananao
Firenena nihaviany / nalehany
Ny fangatahana etsy ambony momba ny fiainganan'i Tiorka sy i Caicos dia natolotra ho an'ny olom-pirenena amin'ny firenena rehetra ao anatin'izany (fa tsy ferana amin'ny) Etazonia, Kanada, Fanjakana Mitambatra ary firenena Karaiba.
Mandritra ny fiasan'ny sidina rehetra, ny Protokolon'ny fahasalamam-bahoaka rehetra mifandraika amin'ny COVID 19 dia hampiharina amin'ny fomba hentitra.
Mikasika ireo mpitsabo, ny izy sy ny mpiasan'ny fahasalamana na olon-kafa izay mety nifandray mivantana tamin'olona ahiahiana ho voan'ny virus na misy tsiranoka avy amin'ny olona toy izany dia, amin'ny fanombanana, dia iharan'ny quarantine mandritra ny efatra ambin'ny folo andro na mandra-pahatongan'ny Ny lehiben'ny mpitsabo dia mamaritra fa sitrana tanteraka ilay olona, ​​na inona na inona aoriana.
Sary natolotr'i Tsidiho ny Nosy Turks sy Caicos